Jesus Christ for all men - पाठ ४
परमेश्वरको न्याय र दया
पहिलो नर र नारी सुरक्षा र सिद्धताको ठाउँ, जहाँ सबै असल थियो, त्यहाँबाट निस्केर परमेश्वरको आज्ञा भंग गरेर शर्म र दोषमा परे । परमेश्वरले उनीहरुको निम्ति बनाउनुभएको बगैँचाबाट उनीहरु निस्कनुप¥यो । तिनीहरुकै पापको कारण अहिले तिनीहरु आत्मिक मृत्यु भोगिरहेका थिए । यसपछि जन्मिने सबै पापी भएर जन्मिने छन् ।
आदम र हव्वाका दुई छोरा थिए ।
१) कैनले आफ्नो भाइ हाबिललाई के ग¥यो ? (उत्पत्ति ४ः८) 
उत्पत्ति ४ः८ – अनि कैनले आफ्नो भाइ हाबिलसँग कुरा ग¥यो । अनि यस्तो भयो – जब तिनीहरु बारीमा
थिए, तब कैन आफ्नो भाइ हाबिलको विरोधमा उठ्यो, र उसलाई मा¥यो ।
२) कैनलाई परमेश्वरले कसरी न्याय गर्नुभयो ? (उत्पत्ति ४ः११,१२) 
उत्पत्ति ४ः११,१२ – अनि अब तिमी यस पृथ्वीबाट श्रापित भएका छौ, जसले तिम्रो हातबाट तिम्रो भाइको
रगत ग्रहण गर्नलाई आफ्नो मुख खोलेको छ । १२ जब तिमी जमीनलाई खनजोत गर्छौ, तब यसले अब
उसो तिमीलाई आफ्नो उब्जनी दिनेछैन; पृथ्वीमा तिमी भगुवा र डुलुवा हुनेछौ ।
एक महान सम्मान
३ंं) बाइबलले हनोक र परमेश्वरको बारेमा के भन्छ ? उत्पत्ति ५ः२२  हामी
जान्दछौँ कि मानिसले परमेश्वरबाट टाढा भएता पनि परमेश्वर अझै पनि मानिससँग हिँड्न र बोल्न अघि
उत्पत्ति ५ः२२ – अनि मतूशेलहलाई जन्माएपछि हनोक तीन सय वर्षसम्म परमेश्वरको साथ–साथ हि“डिरहे;
अनि तिनले छोराहरु र छोरीहरु जन्माए ।
४) परमेश्वरसँग कुन अरु व्यक्ति हिँड्यो ? (उत्पत्ति ६ः९) 
उत्पत्ति ६ः९ – नूहको वंशावली यो होः नूह धर्मी र आफ्नो पुस्ताका मानिसहरुको बीचमा सिद्ध थिए । नूह
परमेश्वरको साथ–साथ हिँड्थे ।
एक भयानक दुःखद् घटना
५) उत्पत्ति ६ः५ मा हामीले जान्यौँ कि मानिसको दुष्टता  थियो ।
उत्पत्ति ६ः५ – तब परमप्रभुले पृथ्वीमा मानिसको दुष्टता ज्यादा भएको र त्यसको हृदयका विचारहरुको
हरेक कल्पना निरन्तर खराबै मात्र देख्नुभयो ।
६) परमेश्वरले यसको विषयमा के भन्नुभयो ? (उत्पत्ति ६ः७) 
उत्पत्ति ६ः७ – अनि परमप्रभुले भन्नुभयोः “मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई म पृथ्वीको सतहबाट मेटिदिनेछु –
के मानिस, के पशु, के घस्रने जन्तु, के आकाशका पक्षीहरु, सबैलाई; किनकि तिनीहरुलाई बनाएकोमा
मलाई पछुतो लागेको छ ।”
७) परमप्रभुको आँखामा नूहले के पायो ? (उत्पत्ति ६ः८) 
उत्पत्ति ६ः८ – तर नूहले परमप्रभुको दृष्टिमा अनुग्रह पाए ।
८) परमेश्वरले नूहलाई के गर्न भन्नुभयो जसद्वारा उसको परिवार र पशुहरु न्यायबाट जोगाइने छ ?
(उत्पत्ति ६ः१४,१८) 
उत्पत्ति ६ः१४ – तिमीले आफ्नो निम्ति गोपेर काठको एउटा जहाज बनाऊ ! त्यस जहाजमा कोठाहरु
बनाउनु, र त्यसलाई भित्रपट्टि र बाहिरपट्टि अलकत्राले लिप्सनू ! १८ – तर तिमीसँग चाहीँ म मेरो वाचा
स्थापित गर्नेछु; अनि तिम्रो जहाजभित्र पस्नू – तिमी, र तिम्रो साथमा तिम्रा छोराहरु, तिम्री पत्नी र तिम्रा
छोराहरुका पत्नीहरु पनि !
९) परमेश्वरले कसरी संसार नष्ट गर्नुभयो ? (उत्पत्ति ७ः१७) 
उत्पत्ति ७ः१७ – अनि चालिस दिनसम्म पृथ्वीमाथि जलप्रलय भइरह्यो; अनि पानी बढ्दै गयो, र जहाजलाई
उठायो; अनि त्यो पृथ्वीदेखि माथि उचालियो ।
टिप्पणीः संसारको लगभग सबै सभ्यतामा विपत्तिजनक बाढी, जसले पूरै संसारलाई डुबाउँछ, को कथा छ ।
यसले यो पनि बुझाउँछ कि सगरमाथामा किन गाडिएका माछाका जिवाश्मा छन् । विश्वव्यापी बाढिको समयमा माछाहरु तिब्र गतिमा आएर पानिमुनि पुरिए । पृथ्वीमुनीको पानी माथि आउँदा यस्तो भएको थियो । नूहको जीवनको ६ सयौं वर्षको दोस्रो महिनामा, त्यस महिनाको सत्रौं दिन – त्यही दिनमा अति गहिरो सागरका सबै मूलहरु फुटे, साथै आकाशका झ्यालहरु खुले । १२ अनि पृथ्वीमाथि चालिस दिन र चालिस रात पानी परिरह्यो । (उत्पत्ति ७ः११,१२)
यो विषयमा अध्ययन गरेका धेरैजसो इतिहासकारहरुले यस्ता कथाहरु २०० वटा छन् भन्ने अनुमान गरेता पनि विकासवादी भूगर्भविद् रोवर्ट स्ककका अनुसार “संसारमा भएका ५०० वटा बाढीका मिथकहरुमध्ये नूहको कथा एउटा हो, जुन सबै प्राचीन मिथकहरुमध्ये सबैभन्दा चर्चित हो त्यसैले यसलाई सबैभन्दा पुरानो पनि भन्न सकिन्छ ।” (२००३, पृष्ठ २४९) स्ककले यो पनि भने ः
भारी जलप्रलयको वर्णन संसारभरी सबैतिर पाइन्छ ..... एक ठूलो बाढीको कथा हरेक मानिसहरु बसोबास
गर्ने महाद्विपहरुमा र धेरै महान भाषा र संस्कृतिका जातिहरुमा पाइन्छ । (पृष्ठ १०३,२४९)
चीनी र एशियन कथाहरु
चीनमा, ठूलो बाढीको विषयमा धेरै कथाहरु छन् । ती मध्ये एउटा नोसु नामक मानिसहरुको समूहबाट आउँछ । उनीहरुका अनुसार परमेश्वरले तीन जना छोराहरुलाई आउन लागेको बाढीको विषयमा सचेत गराउन आफ्नो व्यक्तिगत सन्देशबाहकलाई पृथ्वीमा पठाउनुभयो । सबैभन्दा कान्छो छोरा दुमले मात्र सन्देशबाहकको कुरामा ध्यान दियो । उसले काठको एउटा डुंगा बनायो । पानी आउँदा दुम डुंगाभित्र पस्यो र बच्यो । पानी सुकेपछि त्यो डुंगा तिब्बतको पहाडमा आएर रोकियो जहाँ दुमका ती छोराहरु जन्मिए र उनीहरुले संसारलाई आफ्ना सन्तानहरुले भरिदिए । रोचकरुपमा ‘डुंगा’को लागि प्रयोग हुने चीनी चिन्हले नूह र त्यस डुंगामा भएका सात अरु मानिसहरुको कथा बताउँछ । डुंगा जनाउन प्रयोग हुने चिन्हका तीन भागहरु यी हुन् ः
सरावाकका इबान जातिले ट्रो नामक वीरको विषयमा भन्छन्, जो एउटा डुंगामा आफ्नो श्रीमती र विभिन्न घरपालुवा पशुहरुसँग घुम्दथे (स्कक, पृष्ठ २५२) । भारतवासीहरु मनु नामक एक मानिसका बारेमा कथा भन्छन् जसले बाढीको विषयमा सचेत भएपछि एउटा डुंगा बनाए । पछि, पानी सुकेपछि, उनी एउटा पहाडमा ओर्लिए (स्कक, पृष्ठ २५०) ।
१०) नूह र उसको परिवार डुंगाबाट आएपछि सबैभन्दा पहिले के गरे ? (उत्पत्ति ८ः२०)
उत्पत्ति ८ः२० – अनि नूहले परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए, अनि हरेक शुद्ध पशुबाट र हरेक शुद्ध
पक्षीबाट लिएर त्यस वेदीमाथि होमबलि चढाए ।
११) नूहलाई परमेश्वरले के प्रतिज्ञा दिए ? (उत्पत्ति ८ः२१–२२) 
उत्पत्ति ८ः२१–२२ – अनि परमप्रभुले यो मीठो सुगन्ध लिनुभयो; तब परमप्रभुले आफ्नो हृदयमा भन्नुभयोः
“मानिसको कारणले यस भूमिलाई म अब फेरि कहिल्यै श्राप दिनेछैनँ; किनकि बालककालदेखि नै
मानिसको हृदयको विचार खराब हुन्छ; अनि जसरी अहिले मैले गरेको छु, त्यसरी म अब फेरि हरेक
जीवित प्राणीलाई कहिल्यै हिर्काउनेछैनँ । २२ पृथ्वी रहेसम्म बीउ छर्ने र कटनी गर्ने समय, जाडो र गर्मी,
ग्रीष्म ऋतु र शीत ऋतु, दिन र रातको अन्त हुने छैन ।”
१२) यस प्रतिज्ञाको बारेमा नूहलाई याद दिलाउन परमेश्वरले आकाशमा के राख्नुभयो ? (उत्पत्ति ९ः१३)
उत्पत्ति ९ः१३ –म बादलमा मेरो धनु राख्दछु; अनि त्यो मेरो र पृथ्वीको बीचमा बाँधिएको बाचाको चिनो
१३) परमेश्वर क्रोधमा हुनुहुँदा पनि उहाँ  सम्झनुहुन्छ भनी बाइबलले भन्छ ।
हबक्कूक ३ः२ – हे परमप्रभु, मैले तपाईंको कीर्ति सुनें, र म डराएँ; हे परमप्रभु, वर्षहरुको बीचमै आफ्नो
काम पुनर्जीवित पार्नुहोस् ! वर्षहरुको बीचमै त्यसलाई प्रकट गर्नुहोस् ! क्रोधमा कृपालाई सम्झना गर्नुहोस् !
१४) परमेश्वरले सदा पापको न्याय गर्नुपर्छ । तर, अझै पनि परमेश्वर आफ्नो दया देखाउन चाहनुहुन्छ ।
् त्यसकारण त्यहाँ नूहजस्ता  प्रचारकहरु छन् । (२ पत्रुस २ः५)
२ पत्रुस २ः५ – अनि प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नुभएन, तर भक्तिहीनहरुको संसारमाथि जलप्रलय
ल्याईकन धार्मिकताका प्रचारक, आठौं व्यक्ति नूहलाई जोगाउनुभयो;
स्मृति पद ः परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि कोही पनि नष्ट नहुन्, तर सबैले पश्चात्ताप गरुन् । – २ पत्रुस ३ः१०